Will Joko Widodo win or not? (A KP Appraisal) – အခါပေး ဗေဒင်
akhapaybaydin 27 Apr 2019 23 Dec 2019 Uncategorized
17.4.2019 ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ…
လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုကိုဝီဒိုဒို (Joko Widodo) နဲ့ ပရာဘိုဝို (Prabowo)တို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်…။
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကိုတော့ မေလ- ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါလိမ့်မယ်….။
KP ဟူးရားဗေဒင်အလိုအရတော့ ၁၀-တန့်သန္တိ ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ် (CSL) ဟာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး ၄-တန့်ဘာဝမှာရပ်ကာ၊ ၄-တန့်ရပ် မိမိပိုင်အင်္ဂါနက္ခတ်၊ အင်္ဂါဘုတ္တိနက္ခတ်ကို စီးထားလို့ ၄-တန့်အတွက် အားကြီးတဲ့ ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်လာပါတယ်….။
၄-တန့်ဟာ လက်ရှိအခြေအနေကိုဘဲ ဖော်ပြနေတဲ့အတွက်-
လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုဘဲ ပြန်လည်အနိုင်ရရှိပြီး သမ္မတဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်… No doubt!
17.4.2019 ရကျနကေ့ ကငျြးပခဲ့တဲ့ အငျဒိုနီးရှား နိုငျငံ သမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ…
လကျရှိသမ်မတ ဂြိုကိုဝီဒိုဒို (Joko Widodo) နဲ့ ပရာဘိုဝို (Prabowo)တို့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပါတယျ…။
ရှေးကောကျပှဲရလာဒျမြားကိုတော့ မလေ- ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ကွညောပါလိမျ့မယျ….။
KP ဟူးရားဗဒေငျအလိုအရတော့ ၁၀-တနျ့သန်တိ ဘုတ်တိနက်ခတျသခငျဂွိုဟျ (CSL) ဟာ အင်ျဂါဂွိုဟျဖွဈပွီး ၄-တနျ့ဘာဝမှာရပျကာ၊ ၄-တနျ့ရပျ မိမိပိုငျအင်ျဂါနက်ခတျ၊ အင်ျဂါဘုတ်တိနက်ခတျကို စီးထားလို့ ၄-တနျ့အတှကျ အားကွီးတဲ့ ဇာတျဆောငျ ဖွဈလာပါတယျ….။
၄-တနျ့ဟာ လကျရှိအခွအေနကေိုဘဲ ဖျောပွနတေဲ့အတှကျ-
လကျရှိသမ်မတ ဂြိုကိုဝီဒိုဒိုဘဲ ပွနျလညျအနိုငျရရှိပွီး သမ်မတဖွဈလာပါလိမျ့မယျ… No doubt!
ဂျိုကိုဝီဒိုဒို ပြန်နိုင်သွားပါပြီ…။ လေ့လာနေတဲ့သူများ ဒေတာတွေပါပါတယ်…။ သုတေသန လုပ်ကြည့်ကြပါ…။
နက္ခတ်တွေမှာ အကြားအမြင်လိုမျိုး ဟောနိုင်တဲ့ပညာတွေ ရှိပါတယ်…။
ပထမတော့ သွေးရင်းသားရင်းဘဲ သင်ပေးဖို့ စိတ်ကူးထားတာပါ…။
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထဲက သင်ချင်တဲ့သူရှိရင် လာသင်နိုင်ပါတယ်…။ သင်တန်းကြေး သိန်း(၁၀၀) ကျပ်ပါ…။
ဂြိုကိုဝီဒိုဒို ပွနျနိုငျသှားပါပွီ…။ လလေ့ာနတေဲ့သူမြား ဒတောတှပေါပါတယျ…။ သုတသေန လုပျကွညျ့ကွပါ…။
နက်ခတျတှမှော အကွားအမွငျလိုမြိုး ဟောနိုငျတဲ့ပညာတှေ ရှိပါတယျ…။
ပထမတော့ သှေးရငျးသားရငျးဘဲ သငျပေးဖို့ စိတျကူးထားတာပါ…။
လုပျငနျးရှငျကွီးတှထေဲက သငျခငျြတဲ့သူရှိရငျ လာသငျနိုငျပါတယျ…။ သငျတနျးကွေး သိနျး(၁၀၀) ကပျြပါ…။
09 2500 61346.
Previous ကံကောင်းလာမည် မြန်မာပြည်- ၂၀၁၉ (ကံကောငျးလာမညျ မွနျမာပွညျ- ၂၀၁၉)
Next Tiger Woods အ ကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း (Tiger Woods အ ကွောငျးတဈစတေ့ဈစောငျး)